Epc - Guangzhou Airwoods Deegaanka Teknolojiyadda Co., Ltd.
EPC waxay u taagan tahay injineernimada, soo iibsiga, dhismaha waana qaab caan ah
EPC waxay u taagan tahay injineernimada, soo iibsiga, dhismaha waana qaab caan ah oo qandaraas qandaraas ah. Qandaraaslaha injineernimada iyo dhismaha ayaa fulin doona naqshadeynta injineernimada faahfaahsan ee mashruuca, soo iibsan doona dhammaan qalabka iyo agabyada lagama maarmaanka u ah, ka dibna dhisi doona gaarsiinta xarun shaqeyneysa ama hanti macaamiishooda ah.
Airwoods waxay noqotay shirkad siisa adeeg dhamaystiran injineernimada, soo iibsiga, iyo dhismaha (EPC) waxayna taageertaa macaamiisheeda inta lagu jiro wareegga nolosha oo dhan ee mashruuca. Xirfadlayaal khibrad iyo khibrad badan u leh shirkadda ayaa waxaa ka go'an inay macaamiishooda u fidiyaan adeegyo fara badan laga bilaabo bilowga mashruuca illaa qeexidda iyo naqshadeynta, dhismaha, howlgelinta iyo tababarka, howlgalka iyo dayactirka. adeegyo farabadan oo ay kujiraan injineernimada, nashqadeynta, been abuurka iyo dhismaha goobta.
Iyada oo leh koox aqoon iyo khibrad leh, habka mashruuca la xaqiijiyay, iyo khibradda warshadaha ee aan la mid ahayn, waxaan ku bixin karnaa mashruucaaga waqtiga iyo miisaaniyada. Waxaan u adeegnaa macaamiisha qaranka iyo kuwa caalamiga ah in ka badan 80 dal.